Sida looga soo kabto akoon TikTok tillaabooyinkan fudud | Golaha Moobaylka
Sida loo soo celiyo xisaabta TikTok
Qolka Ignatius | | Shabakadaha Bulshada, Tababarada
Mid ka mid ah baraha bulshada ee ugu dambeeyay ee yimid sanadihii la soo dhaafay isla markaana ku guuleystey inay ku sii nagaato ayaa ah TikTok, oo ah barxad asal ahaan ka soo jeeda ShiinahaIn kasta oo maamulka oo dhan lagu fuliyo shirkad Mareykan ah, si looga fogaado tuhunnada caadiga ah ee dowladda Mareykanka.
Haddii aad jeceshahay shabakaddan bulsheed oo aad si lama filaan ah u lumisay helitaanka koontadaada, hoosta waxaan ku tusaynaa tallaabooyin kala duwan oo aad ku awoodo soo celi kootadaada TikTok, ilaa iyo intaadan fulinin wax ficil ah oo ah in barnaamijku uqalmo inuu yahay mid culus oo si otomaatig ah u horseedaya cayrinta goobta.
1 Sida loo soo celiyo koonteyda TikTok
1.1 Waxaan hilmaamay magacayga adeegsiga TikTok
1.2 Waxaan hilmaamay lambarkayga sirta ah ee TikTok
1.3 Ku soo celi kootada la joojiyay TikTok
Sida loo soo celiyo koonteyda TikTok
Waxaan hilmaamay magacayga adeegsiga TikTok
Kuwo badan ayaa ah barnaamijyada u oggolaanaya dadka isticmaala inay isticmaalaan xisaabaadka kale ee shabakadaha bulshada si ay isu diiwaangeliyaan. Haddii aan horey u haysannay akoon Facebook ama Google ah, howshu waa deg deg iyo fudeyd sida geli faahfaahinta xisaabaadkaas waana intaas.
Dhibaatadu waxay tahay in barxadku uu marin u heli karo macluumaad aad u tiro badan oo annaga nagu saabsan, sidaa darteed waxaa la doorbidaa in la abuuro koonto emayl madax bannaan, oo aan lala xiriirin madal kale. Haddii qalabkeenu yahay iPhone, habka ugu fiican ee aan looga tegin raad ku saabsan meertadan ayaa adeegsanaysa ikhtiyaarka Ku sii wad Apple.
Markaad doorato ikhtiyaarkan, Apple wuxuu adeegsadaa emayl aan caadi ahayn u weeciyaa cinwaankeena emailka AppleSidaa darteed, markii aan ka baxno diiwaangelinta, cinwaanka emaylkaas lama heli karo mar dambe mana ka heli doonno wax xiriir ah bar-kulankan.
Haddii aynaan xasuusan magacayaga isticmaalaha, waxaan isku dayi karnaa mid kasta oo ka mid ah xulashooyinka marin u helka ee barxadda ay na siiso:
Kala soco Facebook
Ku sii wad Apple
Ku sii wad bogga Twitter
Ku sii wad bogga Instagram
Haddii ikhtiyaariyaddan midkoodna aysan ansax ahayn, waxaan isticmaali karnaa lambarka taleefankayaga (ikhtiyaar sax ah oo aan ku diiwaan gelinno) ama ku sameyn karno raadinta akoonnada emaylkeena ereyga TikTok. Qaarkooda, waxaan kaheleynaa emayl TikTok. Hadday sidaas tahay, waxaan horey u leenahay username.
Waxaan hilmaamay lambarkayga sirta ah ee TikTok
Haddii aynaan xasuusan sirta, waxaan dib ula soo noqon karnaa marinka dalabka, taleefanka gacanta ama bogga intarnetka illaa iyo inta aan ka garaneyno magaca adeegsadeena. Si aan u soo ceshano erayga sirta ah ee taleefanka gacanta, waa inaan ku dhaqaaqnaa tallaabooyinka aan hoosta kuugu tusayo:
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan furno arjiga.
Marka xigta, dhagsii badhanka Gelitaanka, oo ku yaal xagga hoose ee arjiga.
Daaqada xigta, guji Ilowday lambarkaaga sirta ah?
Kadib 2 ikhtiyaar ayaa la muujin doonaa: Dib u soo celi lambarka sirta ah ee lambarka taleefanka ama emaylka.
Ugu dambeyntiina, waa inaan galnaa lambarka taleefankeenna (haddii aan ka diiwaangashannay) ama lambarka iyo cinwaanka cinwaanka emaylka ee koontada ku xiran.
Hadda, waa inaan tagnaa cinwaanka emaylka ama sanduuqa SMS ee aaladdayada si aan u gujino xiriiriyaha noo oggolaanaya inaan dib u dhigno lambarkayaga sirta ah ee TikTok.
Nidaamkan wuxuu nagu qasbayaa inaan qorno erey sir ah, na tusi mayso erayga sirta ah ee aan ilaa hadda isticmaaleynay.
Ku soo celi kootada la joojiyay TikTok
Sida shabakadaha kale ee bulshada, si looga hortago koontadaada TikTok in laga joojiyo adeeggan, waa inaad u hoggaansantaa shuruudaha adeegga (haa, kuwa gabi ahaanba aan cidna aqrin). Liiskan weyn, TikTok wuxuu nagu wargelinayaa in koontadayada loo hakin karo sababo kala duwan sida:
Aan gaarin da'da ugu yar ee 13 sano. Haddii aad ka been sheegtay da'daada, oo madalku ogaanayo, waad iloobi kartaa koontadaada TikTok. Kiiskani caadi maaha, tan iyo markii aad isdiiwaangalinayso, laakiin da'da uma baahna adeeggu, kuu oggolaan maayo inaad sii wado.
Dhajinta waxyaabaha aan habboonayn. Si ka duwan Instagram, halkaasoo ibta fudud ay halis gelin karto koontada, sawirada noocan ah si dhab ah looma qaado TikTok. Si kastaba ha noqotee, waxaad sameyn karto waa daabacaadda nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ka soo baxa gacmahaaga. Fiidiyowyada rabshadaha kiciya rabshadaha (dhammaan noocyada), ee laxiriira cunsuriyadda, diinta, jihada galmada, naafonimada, jinsiga, cudurrada halista ah ... ayaa si cad looga mamnuucay dalabka.
Basaas madal. Marka lagu daro xiriiriyeyaasha dibedda, adeegsiga ereyada qaarkood sida hashtags ama aad jeceshahay mid kasta iyo mid kasta oo ka mid ah daabacaadda dadka aad raacdo waa sababaha ganaax toos ah.
Mawduucyada la xiriira daroogada, hubka, aalkolada iyo tubaakada. Matalaada, dallacsiinta ama ka ganacsiga hubka, rasaasta, qalabka lagu rakibo hubka ama waxyaabaha qarxa lama oggola, sidoo kale dhiirrigelinta daroogada ama waxyaabaha kale ee la xakameeyo sida tubaakada.
Khayaanada iyo khamaarka. Khiyaanooyinka kugu martiqaadaya inaad sameyso maalgashi amniga adeegsadayaasha sida midka casuumaada si kor loogu qaado adeegyada sharadka, looma oggola madal.
Daabac macluumaadka qofka. Baahnayn in la sheego, tani waa maskax-laawe, laakiin waligood dhib malahan in la xasuusto.
Kicin is-dilid, is-dhaawacid, ama falal khatar ahLooma oggola madasha, iyo sidoo kale la tacaalida arrimaha sida cilladaha cunnada.
Dhibaateyn iyo cabsi gelin. Si otomaatig ah, barxadda ayaa ka saareysa dhammaan waxyaabaha ku jira muujinta xadgudubka, hanjabaadaha, bahdilaadda, kaftanka iyo cabsi gelinta
Kuwani waa saddexda ugu waaweyn sababaha TikTok u laali karo koontadaada. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale heli karnaa kuwa kale ee ugu kala duwan shuruudaha adeegga ee barmaamijkan, oo aan ka heli karno xidhiidhkan.
Ficil ahaan madal kasta oo kale, si aan ugu soo ceshano akoonkeena TikTok, waa inaan nala soo xiriir email ahaan la madal. Xaalada TikTok iimaylku waa antispam@tiktok.com.
Emailkaan, waa inaan galnaa koontadayada isticmaale iyo isticmaalka aad ka sameysay barmaamijkan. Haddii aad daabacday waxyaabo aad u tiro badan oo barnaamijku aanu taageersanayn, waan xaqiijin karnaa, qalad la'aan, taas ma awoodi doontid inaad soo ceshato koontadaada TikTokXalka kaliya ayaa ah in laga bilaabo wax lagasoo bilaabo oo mid cusub la abuuro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Shabakadaha Bulshada » Sida loo soo celiyo xisaabta TikTok
Sida loo abuuro emojis-ka iPhone ama Android barnaamijyadan